प्रणय सौन्दर्यको सुन्दर कृति ‘समीर’प्रति दृष्टिप्रक्षेपण (कृति समीक्षा) – Chitwan Post
न होता मैँ तो क्या होता ।
साँझ पर्दा चाँदनीको
रात पाएँ आज मैले
प्रीति चोखो लाउँदा पो
आँत पाएँ आज मैले ।
गजल श्रुतिमधुर, कोमलकान्त पदावली एवम् भावाभिव्यञ्जनाभिराम तथा एउटै लयखण्डको रदीफोकाफियामा प्रतिबिम्बित चमत्कारपूर्ण सुन्दर, शालीन र हार्दिकतायुक्त सरल र सहज शैलीमा प्रगुम्फित अनुपमेयी हृदयस्पर्शी पद्य–रचना हो । वस्तुतः गजलमा प्रायोगिक काफिया, हमकाफिया आदि गजल–कलेवरका बाह्यावरण हुन् भने अन्दाजेबयाँ र तगज्जुल वा इबारत, इशारत अनि अदाबाट उत्पन्न हुने रसोद्रेकता नै आन्तरिक शृङ्गार हुन् । अतएव लयात्मकता गजलको प्राण हो भने गेयात्मकता स्पन्दन हो । गजलको प्रकृतिप्रति असीम प्रेम भएका प्रकृति प्रेमी अन्तर्मुखी स्वभावका भावुक गजलकार हुन् । उनी मेरा हितैषी मित्र पनि हुन् । उनका बारेमा केही लेख्न पाउनु मेरा लागि खुसीको कुरो हो ।
वस्तुतः उनी बहरबद्ध गजल सिर्जनाका रहरलाग्दो यात्राका भरोसालाग्दा यात्री हुन् । उनको यो यात्राले नेपाली गजल साहित्यमा नौलो तरङ्ग छोड्ने नै छ । आजको उनको अथक साधना र अध्ययनले भविष्यमा अझै सुकोमल, सुन्दर र स्तरीय बहरबद्ध गजलहरुका ढोका खुल्दै जाने यथेष्ट सम्भावनाहरु छन् । यसका लागि उनले अझै रूचि, जाँगर, साधना र अध्ययन बढाउन जरूरी छ ।
यसै सन्दर्भमा प्रेम–प्रणय, प्रकृति, राष्ट्र, राष्ट्रियता, भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, मानवीयता र युगबोधीजस्ता भाव–प्रभावले भरिएको मूल, मिश्रित र परिवर्तितजस्ता गजलका बहरहरुमा सिर्जित नूतनतम बहर कृति ‘समीर’ शास्त्रीय बहरबद्ध गजलसङ्ग्रह (२०७६) सद्य प्रकाशनको खबरले म हर्षप्लावित भएको छु । यो उनको रदीफोकाफियामा सचेतता राखी सिर्जना गरिएको प्रथम पुस्तकाकार कृति हो । यस कृतिले नेपाली गजल साहित्यको फाँटमा आफ्नो पृथक् पहिचान बनाउने नै छ भन्नेमा म ढुक्क छु । साहित्यिक नामअनुरुप प्रकृति प्रेमी त झन् गजलप्रेमीका रुपमा दृष्टिगोचरीभूत हुँदै छन् । कवितामा महाकाव्यको र गजलमा बहरको उपयोगिता छैन भन्नेहरुका सामु कविहरु महाकाव्य लिएर र गजलकारहरु बहरबद्ध गजलसङ्ग्रह लिएर प्रकट भइरहेका छन् । बहरबद्ध गजल सिर्जना आफैँमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो । गजल रचना गर्दै जाँदा कतै भावको अपूर्णता र कतै बहर–भङ्गताको भय रहने हुनाले समुचित शब्द संयोजन वा सुमधुर पदलालित्यको सन्तुलित अलङ्कारको स्थापना हुन पनि पाउँदैन । जे होस्, प्रतिभा–व्युत्पत्ति र अभ्यासले नै सिर्जनामा सुगमता र सहजताको राजमार्ग निर्माणमा सहयोग पु¥याउँछ । प्रतिभाशाली सर्जकका निम्ति यी केही पनि होइनन् । प्रतिभाशालीले लेखनी समाउनु मात्र पर्छ, बहर आफैँ मिलेर बस्छ, शब्द संयोजन वा पदलालित्य वा अलङ्कार आफैँ संयोजित हुन्छ र भावको मुस्लो आफैँ फुट्छ । यसै प्रसङ्गमा सामाजिक विकृति र विसङ्गति तथा राजनीतिक भ्रष्टाचरणले ओतप्रोत रहेको बहरे मुतकारिब मुसम्मन मक्तूअ मुदाइफ (चारवटा मुस्तफ्फैलुन्) मा आधारितको भावपूर्ण शेरको नमुना प्रस्तुत छ—
‘खुट्टा तान्ने धेरै भेटेँ
आफ्नो मान्छे खोज्दै जाँदा
ढुङ्गा हान्ने धेरै भेटेँ
आफ्नो मान्छे खोज्दै जाँदा ।’
गजलकारले यो कृतिमा प्रेम–प्रणय, आशा, उमङ्गका सुकोमल भावनाहरुका साथ राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, मानवीयता, हक, अधिकार, अभाव, महँगी, बाढी, पहिरो, अशान्ति, अहमन्यतादेखि लिएर युगबोधसम्मका आशा–निराशा र प्राप्ति–अप्राप्तिसम्बन्धी मनोगत धारणाहरुलाई सुन्दर ढङ्गले अभिव्यक्त गरेका छन् । प्रेम–प्रणयले समाच्छन्न फऊलुन्को चार आवृत्तिबाट बन्ने बहरे मुतकारिब मुसम्मन सालिम वा पिङ्गलको भुजङ्गप्रयात छन्दमा आधारित सिर्जना अवतरित छ—
मेरो दिल सिलाऊ
प्रेम–प्याला पिलाऊ ।’
आज नेताहरुको निकम्मापनले गर्दा युवावर्ग रोजगारीको निम्ति विदेसिन बाध्य भएको छ । वृद्ध आमाबाबुलाई छाडेर मुगलान् भासिनु पर्दाका मार्मिक पीडाहरु पनि गजलकारले समेटेका छन् । हेरौ“—
दुःख सारा ओढ्नुपर्ने
बाध्यताले पारिदियो ।’
गजलकारलाई आफ्नो देशप्रति असीम माया र ममता छ । देशमा नै बसेर जनता र राष्ट्रको हितमा काम गर्नुपर्ने अपरिहार्यतालाई अङ्गीकार गर्दछन्, तर कतिपय आफ्ना साथीहरु विदेश पलायन भएको देखेर हृदय द्रवीभूत पार्दछन् । यही“ बसेर केही गर्नुपर्ने भाव अभिव्यक्त गर्दछन् । यसै सन्दर्भको सुन्दर समुद्गार यसरी मुखरित गर्दछन्—
सयौ“ चोट झेल्ने
अचानो बनाई ।’
निःस्वार्थी मान्छे, यहाँ सितिमिति भेटि“दैनन् । असहाय र गरिबहरुलाई हेर्ने नाराहरु मात्रै छन् । स्वार्थीहरुको समाजमा बसेर आफ्नो मान्छे कोही छ कि भन्ने जिज्ञासाले भरिएको मीठो सिर्जना प्रस्तुत छ—
आफ्नो मान्छे खोज्दै
हि“ड्ने को होला त्यो ?
प्यासी आत्मा बोक्दै
हि“ड्ने को होला त्यो !’
गरिब निमुखा जहाँ जहिले पनि शोषित हुन्छन्, पीडित हुन्छन् । अन्यायविरूद्ध आवाज उठाउन सक्ने सामथ्र्य हँुदैन उनीहरुको । समाजमा स्थापित ठूलाबडाहरुबाट शोषित वर्गको पीडालाई यसरी शेरमा उनेका छन् प्रकृतिले ।
म जहाँ कुटिएँ
म जहाँ लुटिएँ
अनि चोक थियो ।
प्रेम–प्रणयमै केन्द्रित सिङ्गो कृति भएकाले नमुनाको निम्ति प्रेम–प्रणयका केही नमुना शेरहरु प्रस्तुत छ—
‘साँझ पर्दा चाँदनीको
अप्सराझैँ रुप राम्रो
कस्तुरीझैँ चाल राम्रो
धन्य रै’छु जोर प्याला
हात पाएँ आज मैले ।’
प्रकृतिले कतिपय गजलका शेरहरुमा रदिफको रुपमा आफ्नो नामलाई पनि प्रस्तुत गरेका छन् । यथाः
प्रेमीकै मायाले ।
खुसी हुन्छ प्रेमी ।
तिमी आयौ खुसी प्रेमी
खुसी नै छे कलाकुञ्ज
गजलमा यी कथन सारा
नलेखेको कहाँ हो र ?
गजलमा गुरू–शिष्यको मर्यादा आजपर्यन्त सुरक्षित नै छ । गजलमा गजलकारलाई तखल्लुसको प्रयोगले स्व–परिचय छोड्न वा भावमा विशेष निखार ल्याउन मद्दत गर्दछ । केही शेर—
यो सुराको मात प्यारो
शोडषीको साथ प्यारो
साँझ पर्नुपर्छ ‘प्रेमी’ ।
समाई टाढा पुगे
छुटेको होला किन ?
अन्त्यमा, गजलकार प्रकृति प्रेमीको यस कृतिले प्रशस्त लोकख्याति र लोकसमर्थन प्राप्त गरोस्, आगामी दिनहरुमा उनको लेखनी अझै सशक्त, परिष्कृत र परिमार्जित बन्दै जाओस् । आफ्ना भावक–पाठकसमक्ष मीठा–मीठा सिर्जनाहरुको वितरण गरिरहने हौसला र जाँगर ताजा बनिरहोस् । हार्दिक शुभेच्छा प्रकट गर्दछु ।
रेवान सौराहाका अध्यक्ष गिरीको रिहाइको माग